Fanaanka Mursal Iyo Xaskiisa Khadra Saliima Waxay U Guurayaan Kenya Sababtu Maxay Tahay Akhri - iftineducation.com
iftineducation.com – Fanaaniinta isqabo ee fanka ku cusub Mursal Muuse Iyo Khadra Saliima ayaa la sheegay in dhawaan u gurayaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya si ay halkaasi ugu hormariyaan fankooda.
Mursal iyo Khadra ayaa bilawgii sanadkaan fanka hal mar isla soo galay waxayna fanka ku bilabayn magalada hargaysa iyagoo si fudud u hormaray fankooda caana ka noqday magalada Hargaysa iyo guud ahaan dhulka Soomaalida ay dagto
Fanaanka Mursal ayaa cadeyay in uu u guurayo isaga iyo xaskiisa magalaada Nairobi si ay halkaas ugu balaariyaan fankooda waxuuna intaas hadalkiisa ku daray inuu doonayo in Filim uu ku jilo magaalada Nairobi.
Mursal ayaa sidoo kale sheegay in uu talada guuritaanka uu ka qaatay Fanaanka ahna Abwaanka Fanka Ku Soo Garab qabtay heesahana u sameeyo waa Abwaan Xasan Dhuxul oo loo yaqaano Laabsalaax.
Haddaba Akhrisayaal fanaanka Mursal iyo Xaaskiisa magaalada Nairobi fankooda maxuu ku soo kordhin karaa ayaad isleedahay.
Fadeexadii Baarlamanka Soomaaliya oo mid ka daran lagu arkay Howlka Baarlamanka dalka Ukrian.+VEDIO